IBrazil ngokubukela kwiNkomfa elandelayo "yeNyaka kulwakhiwo" - iGeofumadas
IBrazil ngokokubona kweNkomfa yoNyaka “yokuSekwa ​​kweziSeko” elandelayo
NgoNovemba, 2013 Microstation-Bentley
Kwi-Systems ye-2004 yeWindows yaqala umsitho waminyaka yonke owaziwa ngokuba yi-Be Awards, kamva owaba yi-Inspired. Ngaphandle kokuwongwa ngokulula, kule minyaka idlulileyo sibonile ukuba iBaltimore Symposium iyeyona Ngqungquthela ikumgangatho ophezulu hayi kuphela ekusebenziseni itekhnoloji yokwenza imodeli yeziseko zoncedo, uyilo kunye nokusebenza; Kulo nyaka i-2013 ithathe inxaxheba kwimiboniso nakwizithsaba zengxoxo malunga nobugcisa obuyimfuneko kulawulo kunye nokusebenza kweeprojekthi.
Ukuba apho de kube sekupheleni kufanelekile ibinzana, xa uGreg, umphathi we-Systems ye-Bentley Systems weza ngaphambili emnyholweni kwaye wayithetha ngelizwi elalibeka ukugqiba kwam kwiiveki zam ezimbini zokuhamba kunye nokuphefumlelwa:
Sidale ukuba iphefumlelwe ukuba ifumane ingqalelo yabo babambe imarike yeziseko zophuhliso, kwaye sibanike imbeko ngayo.
ILondon ibingumzekelo wokuziqhelanisa, apho i ubunjineli bufakwe kwiMidlalo yeOlimpiki Ubonisiwe ngeeprojekthi ezinomtsalane; umsebenzi ophuma endleleni wentengiso yesoftware. Inkampani kunye neenkampani zabucala nezikarhulumente zenza njani isicwangciso sokuphuculwa kweminyaka eyi-15, apho ubukrelekrele besixeko buxhomekeke kumjikelo wobomi bezibonelelo ukusuka Imigaqo ye-BIM.
Inomdla indlela i-900 endaweni yokukhuphisana kwimakethi ene-ESRI, AutoDesk kunye ne-Intergraph, ethatha isigqibo sokugxila kwi-niche ethile evela kwiV8i; i i kuthetha ukuba kuzo ezintathu iimveliso eziphambili: Ulwazi ngoModeli (iiSicelo ku Microstation), ukudityaniswa kweProjekthi (Iprojekthi Yobulumko) kunye neziBonelelo eziSetyenzisiweyo zee-Smart (ii-Assets Wise). Ngenxa yoko, ukugxininisa kwakhe kuPhezulu lwe-500 yeZibonelelo zeZakhiwo neziPhambili apho ubhaliso loluntu kunye nolwangasese lubhaliswe khona ngotyalomali lwezibonelelo abanazo. IBrazil, iSpain neMexico zivelela le meko i-Ibero-American. Kuyathakazelisa ukuhlangula inyani yokubandakanya abanye abalingisi abakwimixholo, ezinje nge-SIEMENS apho i-Bentley inethemba lokungena kwimakethi yokwenza oomatshini kunye ne-Trimble, owona mzekelo ubalaseleyo wokulinganisa phakathi kokubanjwa kolwazi, ukumodareyitha kunye nokusebenza ... kananjalo Siyayiqonda kwithuba eliphakathi njengesihlanganisi sokungenakufikeleleka (hayi kuphela kumjikelo we-BIM), kodwa ngokuqinisekileyo sinobunkunkqele ngakumbi kunesifumene esilula esenzekileyo kwi-Intergraph / Leica / ERDAS emva kokufunyanwa kukaHexagon.
Ngelixa nabani na ebeya kucinga ukuba umcimbi olandelayo uza kuba se-China, amanani akahambelani. Ukubuya kweMelika kutyalo-mali lweMicrosoft lungcono kunase-Asia (43% yabasebenzi, i-45% yenzuzo) ngokuchasene ne-26% / 19% yeAsia; Inomdla kwaye indlela iColombia eli lizwe nelona lizwe likhula ngokuphezulu ekumkelweni kobuchwephesha bayo kwi-2013. Kuyaziwa ukuba iMelika iziko lokutsala umdla emva kokumelana kwayo noqoqosho olukhulu (ngelixa lonke liwela, iLatin America ikhula). Nokuba ayingekhe iwele phantsi na, Siyazi ukuba ubutyebi bendalo kunye namandla ezwekazi lethu ziya kukhula ngakumbi ekutsaleni utyalomali lwamanye amazwe. Ukongeza koku, kukho iziqalo ezihlangeneyo zokuba kutheni iBrazil ingumgqatswa walo mnyhadala kule minyaka mibini izayo, kungekuphela nje njengamandla I-BRICS pop-up:
1 Abanini beZibonelelo eziphezulu ze-500 babonisa ukuba iBrazil ikwi12 apho isekwe kwixabiso, nangona ingaveli ngokusekwe kwinani, elibonisa ukuba uphuhliso lwezixhobo kunye nokusebenza kusezandleni zeenkampani ezinkulu; ngokuchaseneyo neIndiya neSpain, ukunika imizekelo. Siyayazi umgaqo-nkqubo wemarike we-Bentley, othi endaweni yokujonga abathengi abaninzi abancinci, ugxile kwiinkampani ezinkulu nezicebileyo eziyakuthatha ixabiso kuzo iimveliso kububanzi bazo zonke.
2 EBrazil indebe yehlabathi iya kubanjwa kulo nyaka uzayo, nakwi-2016 imidlalo yeOlimpiki; Iminyhadala ebandakanya ukwakhiwa kweziseko zoncedo ezinkulu, kodwa kunye nokusebenza kwembonakalo yehlabathi eyenza ukuba ibe sisithintelo sokutyala esingenakufikeleleka.
3 Ukufunyanwa kweChar Pointer, umakhi wesoftware ye-TopoGRAPH, njengenyathelo lokunyusa ukukhula kweentengiso eBrazil nge25% kwisibetho esinye. Sasibonile ukuba i-Bentley ibeka yena eBrazil kumaqonga aselwandle, ukuveliswa kwamandla kunye nokuhanjiswa; Ngale nto siza kuyibona ingena kwimarike esele ineChar Pointer ngokwemigaqo yendlela, kaloliwe kunye nezinye izibonelelo ezinxulumene nophuhliso lwendawo.
Ngale nto, ndinokulinga ukutsho kwi-2015 -ukuba akunjalo i-2014-Siza kuba noNyaka oMnandi kwiNkomfa yeziSeko, iNkqubo yokuQeqelelwa kunye neCIO eSa Paulo.
Waqhubeka ebaleka njengoko wayelindele, ngoku sikho.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ifomathi yeposi yokulalelwayo
Post Next I-GIS Pro I-GIS yesicelo esihle kwi-iPad?Okulandelayo "